दिन दिनै बढिरहेको गर्मीमा बालबालिकालाई जोगाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय - ज्ञानविज्ञान
गर्मीको मौसममा बालबालिकाहरु धेरै बिरामी हुने गर्छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा अभिभावकले ध्यान दिएनन् भने विभिन्न प्रकारको समस्या देखिने बालरोग विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । अभिभावकले उनीहरुको खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सक डा. गणेश राईले जाडोमा जसरी बालबालिकालाई विभिन्न संक्रमण हुनबाट जोगाउँछौ ,त्यसरी नै गर्मीमा हेरचाह गनुपर्ने बताए ।
“बालबालिकालाई शरीरमा पानीको कमी हुन नदिन नरिवल पानी र फलफूल खुवाउनुपर्छ भने नवजात शिशुको हकमा नियमित स्तनपान गराउनुपर्ने, खानेकुरमा विशेष ध्यान र्पुयाउनुपर्छ । हलुका, सुपाच्य र ताजा भोजन खुवाउनुपर्छ,” उनले भने, “कतिपय अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई गर्मी भयो भने पंखा वा एसीका सामु राख्ने गरेको पाइन्छ । तर त्यस्तो गर्दा उनीहरुको स्वास्थ्यमा विभिन्नमा समस्या आउँछ ।”
गर्मीमा बालबालिकालाई यसरी जोगाउन सकिन्छ :
१. बालबालिकालाई घामको समयमा घर बाहिर लैजाँदा छाता ओढाउने ।
२. बालबालिकालाई घामको अल्ट्राभ्वाइलेट किरणको नकारात्मक असरबाट जोगाउन सन प्रोटेक्सन क्रिम लगाइदिन सकिन्छ ।
३. बालबालिकाको शरीरमा पानीको मात्रा रहिरहनका लागि फलफूलको जुस, नरिवल पानी र फलफूल खुवाउने ।
४. नवजात शिशुलाई शरीरमा पानीको कमी हुन नदिन नियमित स्तनपान गराउने
५. गर्मीमा बालबालिकाको खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यो समयमा हलुका, सुपाच्य र ताजा भोजन खुवाउने ।
६. नवजात शिशुलाई बिहान ९ बजेअघि र बेलुका ६ बजेपछि मात्र घरमै राख्ने वा घर बाहिर लैजानुुपरेमा सूतीको शीतल हुने र पसिना कम आउने लुगा लगाइदिने ।
७. गर्मीमा नवजात बालबालिकालाई एसी वा पंखाको हावा शरीरमा सिधा पर्ने गरी नराख्ने ।
८. अभिभावकले घर बाहिरबाट आउँदा राम्रोसँग हात धोएर मात्र बालबालिका नजिक जाने ।
९. गर्मीमा नवजात शिशुलाई डाइपरका कारण एलर्जी हुने गर्छ । यो समयमा भरसक कपडाको न्याप्किन प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
गर्मीमा धुलोबाट बच्न कस्ता चस्मा छान्ने ?
राजधानीका सडक धुलाम्मे भएृका छन्। सडकमा हिंड्ने जो कोहिलाई यसले समस्या पारेको छ। धुलोबाट संबेदनशील अंग आँखालाई बचाउन चस्माको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।
धुलो मात्रै नभई घामको विकीरणबाट पर्न सक्ने असरलाई समेत चस्माले न्यूनीकरण गर्दछ। आँखाको सुरक्षा मात्र नभई चस्माले सुन्दरता बढाउन पनि उत्तिकै भुमिका खेल्छ।
गर्मी तथा धुवाँ­धुलोबाट आँखालाई जोगाउन कालो चस्माको प्रयोग उपयोगी मानिन्छ। सामान्यतया चस्माले आँखालाई धुलो, धुँवा, किटाणुबाट बचाउन मद्दत गर्छ। त्यसमा पनि कालो चस्माले आँखा बिगार्ने अल्ट्रा भाइलेट विकीरणबाट समेत सुरक्षा दिने चिकित्सक बताउँछन्।
चिकित्सकका अनुसार चस्माको प्रयोग गर्दा आँखामा अल्ट्राभाइलेट रेको प्रभाव कम हुने र मोतिविन्दु तथा ढकनीको झिल्लीमा हुने क्यान्सर समेत घटाउन मद्दत पुग्दछ। बढि घाम हुने भएकै कारण तराईमा मोतिबिन्दु हुनकोे औसत उमेर ४० वर्ष र पहाडमा ५५ वर्ष। आँखा रोग विशेषज्ञ डा. अजितमान श्रेष्ठ जति गर्मी र घाम बढछ उति धेरै कालो चस्मा उपयोगी हुने र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाउँछन्।
त्यस्तै हिउँ, पानीको सतह, घाम लागेको स्थान लगायत बढी चमक आउने स्थानमा चस्माको प्रयोगले हेर्न सहज बनाउनुका साथै अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्दा आँखालाई चोटपटक लाग्नबाट समेत जोगाउने गर्छ।
नेपाली बजारमा फरक मूल्यका रेबन, पोलिस, भोउग, ओकले, गुसी जस्ता विश्व बजारका चर्चित ब्राण्डका चस्माहरु किन्न पाइन्छ। तर माथि उल्लेखित ब्राण्ड मध्ये नेपाली माझ रेबन बढी चर्चित छ। जसको ओर्जिनल चस्माको बजार मूल्य ५ हजार देखि २५ हजारसम्म पर्ने गर्दछ।
अन्य ब्राण्डका चस्मा केही आधिकारीक पसलले मात्र सम्बन्धित कम्पनीबाट ल्याउने हुनाले तिनमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना न्युन रहन्छ। तर नेपालमा रेबन लेखेका चस्मा फुटपाथ देखि महँगा पसलहरुसम्म पाइने गर्छ। जसमा नक्कली र सक्कली छुट्याउन नसक्दा ग्राहक ठगिने गरेका छन्।
दरबारमार्ग स्थित ‘अपसन्स’ पसल सञ्चालन गर्दै आएका अनुज शाक्यका अनुसार नेपाली बजारमा चीन तथा इटालीबाट चस्मा भित्रिने गर्छ। जसमा इटालीबाट आयात हुने चस्मा आधिकारिक ब्राण्डको विक्रेता मार्फत सोझै ल्याइएको हुन्छ। चीनबाट आयात हुने चस्मामा ब्राण्डेड नाम राखेर बनाइन्छ र ग्राहक झुक्याउन ‘मेड इन इटाली’ वा ‘मेड इन युएसए’ भनेर बेचिन्छ।
उनले भने, ‘नेपालमा क्रेज बढे पनि ओर्जिनल चिन्न नसक्दा हाल ७० प्रतिशत मानिस चस्मा किन्ने क्रममा ठगिने गरेको पाएको छु, गुणस्तरमा भन्दा मूल्यमा ध्यान दिने तथा जस्तो पायो त्यस्तै पसलमा चस्मा किन्नाले अधिकाशं मानिस ठगिने गरेका छन्।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वका ४० वर्ष भन्दा मुनिका ४० प्रतिशत तथा ४० वर्ष नाघेका सबै मानिसलाई चस्माको आवश्यकता पर्दछ।
कसरी चिन्ने ओर्जिनल चस्मा?
व्यवसायीहरुका अनुसार चस्मा किन्नु भन्दाअघि त्यो प्लास्टिक वा पोलाराइज्ड युभी ग्लास के बाट बनेको भन्ने कुरामा चनाखो हुनुपर्र्छ। त्यस्तै किन्न लागेको चस्माको स्टिकर वा लोगो हेर्ने, ‘ग्लास स्टिकर’मा चस्मालाई परीक्षण गर्ने र ‘ब्राण्ड कन्सेप्ट’ तथा ‘जेन्यून’ ठाउँमा किन्ने गर्नुपर्दछ।
चिकित्सक श्रेष्ठका अनुसार घाम बढी लागेको समयमा आँखाको नानीको आकार तथा व्यास सानो हून्छ। यस्तोमा कमसल चस्मा प्रयोग गर्दा आँखामा अँध्यारोपन बढ्न जान्छ र त्यसले नानी वरपरको व्यास ठूलो बनाउँछ। कमसल तथा नबुझी किनेका चस्मा लगाउँदा आँखाको नानी र पर्दासम्म बढी प्रकाश पुग्ने र त्यसले व्यास ठूलो बनाउने तथा सूर्यको किरणलाई फिल्टर गर्न नसक्ने हुन्छ। यसको कारण हानिकारक प्रकाश भित्र छिरेर आँखालाई झन् नराम्रो असर पु‍र्याउने गर्छ।
कसरी छान्ने आफूलाई सुहाउने चस्मा?
चस्माले मानिसको व्यक्तित्वको पहिचानमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। चस्माको बनोट र अनुहारको आकार अनुसार चस्मा छान्नु पर्छ।
दृष्टी विशेषज्ञ किशोर सापकोटाका अनुसार व्यक्तिलाई कस्तो फ्रेम भएको चस्मा सुहाउँछ भन्ने कुरा अनुहारको बनोट, छालाको रङ तथा कपालको शैलीमा निर्भर हुने गर्छ। उनको भनाइमा चारपाटे वा गोलो अनुहार भएका व्यक्तिलाई ‘रेक्टेन्गुलर’ तथा लाम्चो अनुहार भएका व्यक्तिलाई बढी चौडा भएको चस्मा प्रयोग गर्दा सुहाउँछ।
उनका अनुसार लाम्चो (ओभल) आकारको अनुहार भएका व्यक्तिलाई भने प्राय सबै खाले फ्रेमको चस्मा सुहाउने गर्छ। त्यस्तै नाक लामो भएका व्यक्तिलाई लेन्सको बीचको भाग अलि छोटो तथा नाकको तल्लो भागमा अडिने खालको र छोटो नाक भएकाहरुलाई नाकको शिरानमै अडिने खालको चस्मा सुहाउने गर्छ।
चस्माको माथिको भाग र प्रयोगकर्ताको आँखीभौं समानान्तर नभएमा चस्माले आखीँभौं नै ढाक्ने खालको हुनुपर्दछ। कपाल खौरिएको वा छोटो भएका व्यक्तिलाई मसिनो वा हलुका फ्रेम आकर्षक हुन्छ भने लामो कपाल भएकाहरुलाई मध्यम स्तरको फ्रेम र ठिक्क कपाल हुनेहरुलाई ठूलो र गाढा फ्रेमको चस्मा प्रयोग गर्दा सुहाउने उनी बताउँछन्।
गर्मीमा आँखामा देखिने समस्या :
मौसम परिवर्तन हुने समयमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । गर्मी मौसम सुरु भइरहेको छ । यो याममा हावा चल्ने, धूलोधुँवाले आँखामा विभिन्न खाले समस्या ल्याउने हुन्छ । यसैले गर्मीमा आँखालाई यसबाट जोगाउन आवश्यक छ।
यो समयमा आँखा सुख्खा हुने, एलर्जी तथा आँखा पाक्ने समस्या देखिन्छन् ।
आजकल बाहै्र महिनाजसो आँखा सुख्खा हुने समस्या देखिन थालेको छ । गर्मीमा धेरै हावा चल्ने, धेरै कम्प्युटरमा काम गर्ने कारणले सुख्खा हुने समस्या हुन्छ । आँखालाई पनि आरामको जरुरत हुन्छ । लामो समय काम गर्दा आँखा थाक्छ । त्यसैले कामको बीच–बीचमा आँखालाई आराम दिने, पर्याप्त पानी पिउने गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँमा बाटो विस्तारले गर्दा जताततै धुलो छ भने गाडीमोटरको धुवाँपनि उत्तिकै छ । त्यसले आँखामा एलर्जी हुन्छ । जसले आँखा चिलाउने, रातो हुने समस्या लिएर अस्पताल आउनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । आँखालाई यी समस्याबाट जोगाउन बाहिर निस्कँदा चस्मा अथवा सनग्लास लगाएर निस्कने, घर आएपनि सफा पानीले सफा गर्नुपर्छ । बच्चाहरुलाई पनि यी कुरा सिकाउनुपर्छ ।
चस्मा प्रयोग गर्दा जति मंहगो भयो उति राम्रो भन्ने चलन छ तर आँखालाई जोगाउन ब्राण्डेड नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले आफ्नो आर्थिक स्थितिले भ्याउने मूल्यको चस्मा किनेर लगाउन सकिन्छ ।
आँखा पाक्ने रोग सरुवा भएकाले अन्यलाई पनि छिटो सर्न सक्छ । तर हामीले भन्ने गरेजस्तो आँखा पाकेको व्यक्तिसँग आँखा जुधाउँदैमा भने सर्दैन । रोगीले प्रयोग गरेका वस्तुहरु अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्दा, रोगीको रुमाल, तकियाजस्ता चीज अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्दा किटाणुको माध्यमबाट सर्छ ।
आँखा पाकेको बेलामा सरसफाईमा ध्यान दिन सकिएन भने यो लामो समयसम्म निको हुदैँन । तर सरसफाईमा ध्यान दिइयो र औषधि प्रयोग गरेमा १० दिनभित्र निको हुन्छ ।
आँखा पाकेको बेला बाहिरमात्र सफा गरेर हुदैँन । कटनलाई तातो पानीमा भिजाएर एउटा हातले आँखा फट्टाएर भित्र पनि सुस्तरी पुछ्नुपर्छ । जाडोमा भन्दा यी समस्याले गर्मीमा बढी समस्या अस्पताल आउनेको संख्या धेरै हुन्छ ।
आजकल आँखामा कुनै समस्या हुनेबित्तिकै आफूखुसी औषधि किनेर राख्ने चलन बढेको छ । जुन एकदमै गलत हो । त्यसरी प्रयोग गर्दा त्यसले आँखालाई असर पारिरहेको हुन्छ । हामीकहाँ धेरै औषधिको साइडइफेक्टस हुन्छ । त्यसैले एकपल्ट नेत्रविशेषज्ञको राय लिनु आवश्यक छ ।
Don't Miss it के हो पुदिना ? बढ्दो गर्मीमा यस्ता छन यसका फाइदा
Up Next दिउँसो सुत्ने बानी राम्रो कि नराम्रो ? अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी, जानीराख्नुहोस